Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo celiso faylasha iCloud ee la tirtiray, xiriirada, kalandarka iyo xusuusinta | Wararka IPhone
Xaqiiqdii waad ka fekertay wax ka badan hal jeer: haddii xiriiriyahayga laga tirtiro qalabkeyga, si toos ah ayaa looga tirtirayaa iCloud, maaddaama isbeddelada isla markiiba la shaqeynayo, sidee baan uga soo kaban karaa? Su'aashan illaa shalay waxay lahayd jawaab adag, marar badanna way tagtay (xaaladaha ugu fiican) iyada oo loo marayo dib u soo celinta qalabkaaga si aad uga soo kabato nuqul nuqul ah. Laakiin hadda Apple waxay ku dartay shaqeyn cusub iCloud.com oo kuu oggolaaneysa inaad kabsado wixii files tirtiray ka iCloud drive, xiriirada, kalandarka iyo xusuusinta. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta hoose.
Si aad u soo ceshato xogtaan waa inaad marin ka heshaa shabakadda iCloud.com iskuna cadee macluumaadkaaga marin u helka. Haddii aad awood u leedahay xaqiijinta laba-tallaabo karti, waxay xitaa ku weydiin doontaa inaad gasho lambarka loo diray aaladda aad ku kalsoon tahay. Markaad gudaha gasho, guji Settings, astaanta ku taal dhinaca midig ee hoose, una gudub salka bogga. Dhinaca bidix waxaad ka heli doontaa xulashooyinka aan raadineyno.
1 Soo celi faylalka
2 Soo Celinta Xiriirada
3 Soo celi Kalandarka iyo Xusuusinta
Soo celi faylalka
Liiska faylasha la tirtiray ee ka socda iCloud Drive ayaa u muuqda. Waad ku kala sooci kartaa magac ama taariikh haddii aad doorbideyso. Guji midka aad rabto inaad soo celiso waxayna si toos ah ugu laaban doontaa galkaaga iCloud Drive. Faylasha waxaa la kaydiyaa oo keliya 30 maalmood, ka dib markaa si joogto ah looga tirtirayo.
Soo Celinta Xiriirada
Xiriirada Dib looma soo celin karo mid mid, laakiin tiro ahaan. Waxaad ka heli doontaa nuqulada keydka ah ee keydsan (ma aqaano qaabka ay raacayso) iyo adigoo gujinaya badhanka soo celinta, xiriiradaas ayaa beddeli doona kuwa ku jira dhammaan aaladaha isla xisaabta iCloud. Dabcan, kuwa aad hada haysato kahor intaadan badalin waxaa lagu keydin doonaa keydkan hadiiba aad rabto inaad soo kabsato.
Soo celi Kalandarka iyo Xusuusinta
Kalandarka iyo xusuusinta ayaa si isku mid ah u shaqeeya, dib u soo celinta baloogga iyo keydinta kuwa hadda jira si aad u soo kaban karto haddii aad u baahatid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo celiso faylasha iCloud ee la tirtiray, xiriirada, kalandarka iyo xusuusinta
Si qalad ah ayaan u tirtiray galka xusuusiyaha, uma muuqato dib u soo celin, xagee kale ayuu noqon karaa? Waxaan hayaa macluumaad muhiim ah aniga, waxaan u baahanahay inaan dib u helo mana heli karo, sidee ku sameeyaa?
Jawaab america rodriguez
Waa inay halkaas joogaan, waa meesha kaliya ee ay ku dhammaadaan markaad wax ka tirtirto qalabkaaga.
Sida loo rakibo iOS 8.4 qalabkaaga